‘एउटा अबोध बालकको रुवाइ जस्तै हो साहित्य लेखन’ « Sansar News
२०३१ मा कास्कीमा जन्मेका कवि तथा निबन्धकार बिष्णु पादुका पछिल्ला केही समय देखि कोहलपुर बाँकेमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् तर उनको कर्मथलो भने डोल्पा हो । २२ बर्षदेखि शिक्षण पेसामा संलग्न पादुका पछिल्लो १६ बर्षदेखि नियमित रुपमा तेन्जिङ नोर्गे आधारभूत विद्यालय ,छार्का ताङ्गसोङ्ग-४, डोल्पा माविमा शिक्षक छन् । विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरुबाट सम्मानित पादुका पछिल्लो समय साहित्यको कान्छो विधा ‘साइनो’को बिकास प्रबर्द्धनका लागि अभियन्ताका रुपमा सक्रिय रहेका छन् । उनको पहिलो साइनो कृति पनि प्रकाशित भइसकेको छ । उनै साइनो अभियन्ता बिष्णु पादुका सँग संसारन्युजको लागि बालकुमार क्षेत्रीले गरेको कुराकानी
लामो समयदेखि अध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ र अहिले बिकट स्थानमा सेवारत हुनुहुन्छ । यो समयलाई के कसरी उपभोग गर्दै हुनुहुन्छ ?
हजुर ! म बिगत २२ वर्षदेखि यतै कार्यरत छु । चैत्रदेखि विद्यालय सुचारु (सञ्चालन) हुनुपर्ने हो । कोरोनाको कारण लकडाउन भएपछि न त घरमा पुग्न सकियो न त विद्यालय खोल्न नै । आफुले ल्याएका र विद्यालयको पुस्तकालयमा उपलब्ध पुस्तक पढ्दै ,विद्यालय हातामा रहेको बारी, फूलबारी गोड्मेल गर्दै र केही फुटकर कविता, केही लेख र थप साइनो लेख्दै बिताएको छु । समय कटाउन बेलाबेला अन्लाईन आइदिनाले थोरै सूचना पनि मिलेको छ ।
सर ! आफ्नो पेशासँगै साहित्यको सेवा अझ भनौ सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, कोरोनाको प्रभाव बढेको बेला के कस्ता साबधानी अपनाउनु भएको छ ?
अन्य अभियन्ता झैँ पूर्णरूपमा नलागे पनि पेशागत र लेखकिय हिसावले यी दुबै सामाजिक कर्म नै हुन् । चिसो हावापानीको भूगोल भए पनि नियमित हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने गराउने गरिएको छ । बाहिरबाट गाउँमा प्रवेश गर्ने सबैलाई यहीँ विद्यालयमा स्थापित क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आवस्यक सरसहयोग गरिएको छ । स्थानीय निकायमा बारम्बार अनुरोध गरेर स्वास्थ्यकर्मीको बसाई नियमित बनाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य हो भन्ने जानकारी दिन लागि परेका छौँ ।
सहरका बिधालय तथा कलेजमा त अन्लाईन मार्फत पनि पढाई संचालन गरिएको छ, त्यहाँका बिद्यार्थीहरुको अध्यापन कसरी चलिरहेको छ ?
विगत एक वर्षदेखि वल्ड लिंकको ग्रामीण सञ्चार अन्तरगतको वाइफाइ र नेपाल टेलिकमको नमस्तेको टावर स्थापना भएपछि धेरै राहत भएको छ । पलपल आउने जाने नेटवर्क भएपनि सूचना पाइएको छ । कमजोर नेटवर्कका कारण अन्लाईन कक्षा संचालन गर्न सकिएको छैन । घरमा स्वअध्ययन बाहेक अन्य विकल्प नभए पनि विद्यार्थीहरुकै पहुँचमा हुनाले केही सोधपुछ र निर्देशन नियमित जस्तै छ । दूरी कायम गर्दै औपचारिक कक्षा संचालन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
अहिले बिश्व तथा हाम्रो देश कोरोनाको चपेटामा परेको छ । विभिन्न संघसँस्थाहरु र सरकारले देशैभरी राहत बाँडिरहेको अवस्था छ । त्यस ठाँउमा सरकार लगायत दातृ सँस्थाहरुको उपस्थिति कस्तो छ ?
सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो, अरु सामान्य अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रम लिएर आउने संघसंस्थाको अहिले नाकमुख नै देखिएको छैन । स्थानीय निकायले समेत राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको लागि खान बस्न सम्म सुविधा दिएको छ । लकडाउन अवधी लम्बिदै जानाले यहाँको आर्थिक उपार्जनको मुख्यश्रोत यार्चागुम्बु संकलन समेत रोकिएकोले कोरोना भन्दा भोकमरीले ज्यान गुमाउन बाध्य हुने छन् दुर्गमका जनता ।
केही समय यता नेपाली साहित्यको कान्छो विधा साईनोको बिकास तथा प्रबर्द्धनमा सक्रिय देखिनु भएको छ साइनो बारे आफ्नो धारणा राखिदिनु होस् न !
अधिक समय सञ्चारविहिन क्षेत्रमा छु थिएँ । ढिलोगरी साइनो बारेमा सुनेँ । मिना डाँगीमार्फत् छाया सर ,केशव सर अनि तपाईसँग जोडिए पछि साइनोसँग आकर्षित भएँ । गएको चार महिनामा पाँच सयको हाराहारीमा साइनो लेखेँ । निरन्तर लेख्दै छु ।
‘साइनो सात आठ नौ गरि चौबीस अक्षरिय ( वर्ण) को संक्षिप्त कविता हो । जसको तिनवटा पद हुन्छ । सबै पदको आफ्नो आफ्नो अर्थ हुन्छ तर समुच्चयमा एउटा गहन अर्थ बोकेर आएको हुन्छ । भावको प्रमुखता कविताको मुटु हो । यसले बोक्ने विम्ब प्रतीक र व्यङ्ग्य यसको शरीर हो ।’
साइनोको थालनी र यसको गतिविधि बारे के भन्नुहुन्छ ?
थालनीको हिसाबले चर्चा, पाठक र सर्जकको वृद्धि दिनानुदिन बढेको छ । लेखन विषयको दायरा पनि फराकिलो भएको छ । यसमा ठूलो भूमिका आधुनिक सञ्चार फेसबुक, म्यासेन्जर, रेडियो, टिभी ,अन्लाईन पत्रीका र छापा पत्रिका समेतको उल्लेखनीय योगदान छ । साइनोका लागि परेर लाग्ने बालकुमार क्षेत्रीको योगदान साइनोले कहिल्यै भुल्ने छैन । कोहलपुरमा महानन्द ढकाल र कैलालीमा आर्त अकुलीनको योगदान पनि विशेष छ । साइनो लेख्ने सम्पूर्ण साइनो सर्जकको नाम अब एउटा लामो सूचि बनिसक्यो । यो नै गर्वको विषय हो ।
तीन पद,चौबिस अक्षरमा पूरै भाव त्यसमाथि गुच्छाहरु स्वतन्त्र हुनुपर्ने यस्तो विधाले सिर्जनाको संरचनालाई झन् जटिल बनाएको भन्नेकुरा सर्जकहरुबाट आएका छन् । यसको सहजीकरण के होला ?
लेखिनु मात्रै काव्य हुँदैन । कुनैपनी विधाका आफ्ना नियम हुन्छन् । त्यसमाथी संक्षिप्त विधाहरु भनेका बिजुलीका झट्का हुन् । विद्यूतीय तरङ्ग झै झिलिक्क हुने र त्यसलाई छोप्ने काम सफल साइनोकारको हो । सरल वाक्यमा तीन पद सात आठ नौ अक्षर गन्नु मात्रै साइनो सिर्जना होइन । निपात र संयोजक थपेर कनेर लेखिने साइनोले संख्यामा त बल देला गुणात्मकता दिदैन । मलाई लाग्छ साइनो लेख्नु जटिल कर्म नै हो । आफ्नै रचना एक दुई बर्ष पछि आफैलाई फिक्का लाग्छ भने त्यो रचना परिपक्व मानिदैन । एउटा मात्रै साइनो किन नलेखियोस्, कालजयी होस् भन्ने मान्यता राखियो भने तीन गुच्छा, फरक अर्थ र समुच्चयको मुल भाव आफैं झल्किन्छ । म त भन्छु पर्मको प्रशंसाको भोक नपालौं । नेपाली मन मुटुको नयाँ बिधालाई जति सकिन्छ खँदिलो पारौं । अभ्यास गर्दा असहज पनि सहज हुन्छ । लेख्नु भन्दा पढ्नु धेरै नै यसको अचुक उपचार हो ।
नेपाली साहित्यको नयाँ विधा साइनोमाधेरै सष्टाहरु जोडिएका छन्, यो राम्रो पक्ष हो तर यसको साख उचाल्न संख्या प्रयाप्त हुन्छ कि अरु केही चाहिन्छ ?
निसन्देह शाख उठ्न गुणस्तर चाहिन्छ । तर जति धेरै सर्जक उति धेरै गुणस्तरको नियम पनि भुल्नु हुन्न । हरेक कवि आफ्नै प्रतिद्वन्दी हो । एउटा अब्बल रचना आएपछी दोश्रो तेस्रो कमजोर आउँदा उ स्वयं हारिरहेको हुन्छ । लेखिने क्रममा धेरै संख्यामा लेखिन सक्छ । त्यसको पुनर्लेखन र सम्पादन गर्न पनि छुटाउनु हुँदैन । अर्को कुरा प्रदर्शन मात्रै पनि सबैकुरा होइन । आफुसँग हुँदा कुनै रचना जति सुरक्षित र मजबुत हुन्छ प्रकाशनमा आएपछि रचनाको आन्तरिक शक्ति क्षीण हुन्छ तसर्थ आफ्नो रचनाको शक्ति क्षीण हुन दिने नदिने त्यो सर्जकको निजि धारणा र अधिकारको कुरा हो ।
कविताको उपविधा साइनो र साहित्यका अरु विधामा के अन्तर पाउनु भयो ?
म विशेषगरि गद्य कविताको विद्यार्थी भएको हुँदा म साइनोमा रमाएँ । यो स्वछन्द बिधा हो, संक्षिप्त विधा हो । यसको भाव विम्ब व्यंग्य अलंकार इत्यादीको बारेमा मैले केही लेखहरु पनि प्रकाशन गरेँ । एउटा साइनोको भाव र वृत्तमा रहेर एउटा महाकाव्य, उपन्यास, निबन्ध संग्रह नै लेख्न सकिन्छ । त्यसैगरी एउटा पुस्तकलाई एउटा साइनोमा अटाउन पनि सकिन्छ । सार खिचेर ल्याउँदा ।
अन्य विधा भन्दा नितान्त नौलो र पूर्णरूपमा नेपाली बिधा हो यो । साइनो ढिलो चाँडो नेपाली साहित्यमा स्थापित हुने कुरामा म दुइमत राख्दिन । अहिले नै यो भएन ,मुल्य मानकस्तर भएन भनेर आलोचना मात्रै बर्षाउनु अलिक हतार हुनेछ । तपाईं हामी सबै साइनोका स्वतन्त्र खेताला हौं । रोप्दै जाउँ ।
साइनो ‘भूत न भविष्य’, भनेर ख्यालठट्टा गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
साइनो भनेको के भनेर सोध्ने सर्जक पनि हुनुहुन्छ । भविष्य कस्को छ भन्ने कसको छैन भन्ने यो धर्ती र ब्राह्मणकै भविष्य हाम्रो आयुको तुलनामा पो धेरै झैँ लागेको हो । मानविय चलखेल धर्तीमा हुँदा सम्म साइनोको अर्थ छ । साइनो भनेको मानविय सम्बन्ध मात्रै होइन, सम्पूर्ण चराचर एक अर्कोसँग सम्बन्धित छ । त्यो साइनो हो । साइनो बिधालाई प्रचार प्रसार नपुगेकै हो । गोष्ठी सेमिनार भेलाको आवश्यकता छ । कोरोना कहर सकिएपछि साइनोले एउटा स्पस्ट गोरेटो लिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
हजुरको साइनो कृति प्रकाशित भैसकेको छ । सुन्दर साइनो लेखनका लागि मुलभुत कुराहरु के के होलान् ?
म आफ्नो कृतीका बारेमा धेरै कुरा भन्दिन । त्यो सार्है कम पाठकको हातमा छ । अहिलेको महामारी र जागिरे जीवनको कारण पाठक सम्म र्पुयाउन सकिन । समय आउला ।
साइनो सुन्दर हुन प्रमुख कुरा मानसिक झट्का नै हो जसले पहिला आफू या सर्जकलाई हल्लाओस् । अक्षर संख्या र तीन पद यसका आधार हुन् जग हुन् जस्लाई हल्लाउन पाईदैन ,त्यो झट्का दिने विषय के हो ? गंभिर या हलुका ? ‘नौलो या सामयिक ?,’क्षणिक या कालजयी ? यो कुरामा साइनो सर्जक स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि बल्ल शब्द चयनमा लाग्नु पर्छ । यसरी केही चरण पार गरेर त्यसलाई कम्तिमा तीनवटा कोणबाट परिभाषित गर्न सकिन्छ भन्ने लागेमा बल्ल एउटा स्तरीय साइनो लेखिन सक्छ ।
किन चौबीस वर्ण वा अक्षर ?, किन तीन पद ? किन फरक र समुच्चय अर्थ इत्यादि विषयको उत्तरमा अन्य लेखहरु त आएकै छन् ।
साइनो संसार पेजमा पोस्ट भएका रचनाहरु अक्षरिय मानक पूरा भएपनी स्तरीय साइनो छैनन् भन्ने गुनासो सर्जकहरुबाटै आएको छ । यस्तो आशंका कम गर्न हामी अभियन्ताहरुको भूमिका के कस्तो हुनुपर्ला ?
सिर्जनाको मामिलामा म कुनै सिर्जनाको आलोचना गर्दिन किन भने त्यो अन्तरहृदयबाट आउने कुरा हो । हो पाठकलाई हलुका लाग्नु स्वभाविक हो । अथवा क्लिष्ठ लागेको हुन सक्छ । एउटा अबोध बालकको रुवाइ जस्तै हो साहित्य लेखन, अरुको रचना कपिपेस्ट गर्नु रचना होइन । अतः त्यो रुवाइको माग के हो त्यो आमा बाहेक अरुले पनि बुझ्न सक्नु साहित्य हो । यहाँको सन्दर्भमा साइनो हो ।
सर्जक आमा भएर हेर्नुपर्छ कि मेरो सन्तानको रुवाइले कति मान्छेलाई आल्हादित बनाउन सक्छ । कहिलेकाही सन्तान रोएको आमाले नसुनेको पनि देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो रचना कसिलो रसिलो र जहिले जस्ले पढ्दा पनि सोचनिय बनोस् भन्ने संकल्प सहित लेखिएका साइनो अवस्य स्तरिय हुन्छन् । उसो त अहिले नै यो स्तरिय र यो फितलो भनेर मूल्यांकन गर्न पनि हतार हुन सक्छ । स्तरीय आउने दिन कसैले रोक्न सक्दैन ।
साइनो सर्जकका लागि दिनुपर्ने अन्य केही सुझावहरु छन् कि ?
एउटा विकट भूगोलको साथिलाई सम्झेर केही प्रश्न राखेर मेरो अवधारणा सार्वजनिक गर्ने मौका दिनु भयो खुशी छु । यो बिपत र महामारीमा सबै दाजुभाइ दिदिबहिनीमा स्वस्थताको कामना गर्दछु । रोगबाट आफू बचौं अरुलाई पनि बचाऔं । कोविड १९ पोजेटिभ नै देखिएका आफन्त र साथिहरुप्रति पनि मानविय व्यवहार गरौं । यो अवसरका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ।